Abakhiqizi nabahlinzeki be-cleanroom - China Ifektri yokuhlanza ehlanzekile
Incwadi yokubhalela ehlanzekile
Incwajana yokubhalela ehlanzekile Yenziwe ngephepha elikhethekile elinothuli, elinokungcola okuphansi kwe-ionic & i-Low particle kanye ne-fiber generation.Yincwadi yokubhala evuselelekayo futhi enobungani.Umugqa wencwajana ubhalwe ngoyinki okhethekile.Ingahambelana nakuma-inki amaningi ngokubhala Nciphisa okuphawulekayo ukwenziwa kothuli olucekeceke, amandla wokufaka oyinki athuthukisiwe. Inganciphisa uthuli olwenziwe yimbobo ebophayo yencwajana yokubopha ebophayo ibe ubuncane.
Umata onamathelayo, owaziwa nangokuthi ukunamathela phansi okunamathelayo, usebenzise ubuchwepheshe besimanje futhi unengcina yamanzi ezwela ingcindezi evumela imvelo ukunamathela okufanayo kobuso bonke besendlalelo ngasinye sokhuni olunamathelayo. Ayikho i-glue, ayikho iphunga, ayikho ubuthi.
I-Roller Yokuhlanza Abicah
Iroli le-silicone ngumkhiqizo wokususa uthuli owenziwe ngokwakho owenziwe ukusabela kwe-silicone nezinto ezisetshenzisiwe zokhiye. Ubuso bushelelezi njengesibuko, ivolumu ilula, futhi usayizi wezinhlayiyana ungaphansi kuka-2um.
Isembozo somunwe se-anti-static senziwe nge-anti-static irabha ne-latex. Ayinawo uwoyela we-silicone nama-ammoniated compounds, angavikela ngempumelelo ugesi we-static. Indlela ekhethekile yokuhlanza yehlisa okuqukethwe kwe-ions, izinsalela, uthuli nokunye ukungcola. Ulawula ngokuqinile ukukhiqizwa kukagesi ongaguquguquki, ofanele ukuphatha izinto ezizwelayo ezimile, ukwelashwa ngothuli oluphansi, efanelekile ekamelweni elihlanzekile.
I-DCR pad, iphedi yokususa uthuli, isetshenziswa kanye ne-silicone yokuhlanza i-roller.Ingasusa uthuli kumaroli wokuhlanza abicah ukuqinisekisa ukuthi i-roller yokuhlanza ingaphindwa isetshenziswe.Iyasetshenziswa kakhulu kunqubo yokuhlanza indawo yebhodi ngenhlanzeko ephezulu.
I-Cleanroom Paper yiphepha eliphethwe ngokukhethekile elenzelwe ukunciphisa ukwenzeka kwezinhlayiya, izinto ezihlanganiswa i-ionic, nogesi ongaguquguquki ngaphakathi kwephepha.
Isetshenziswa egumbini lokuhlanza lapho kukhiqizwa khona ama-semiconductors nemishini yobuchwepheshe obuphezulu.
I-Industrial Cotton Swabs
Ama-swabs okotini wokuhlanza, ama-cotton swabs angenalo uthuli, ama-swabs ahlanzekile kakotini, enziwe ngentambo kakotini, asetshenziselwa ukusula nokuhlanza imikhiqizo enembayo ezimbonini ezahlukahlukene. Ingasusa ukungcola futhi ihlale ihlanzekile endaweni ekhethekile yenqubo yokukhiqiza (ukusula indwangu akukwazi ukusulwa). Okuqukethwe kokusalela kwamakhemikhali okuphansi ngemuva kokusula.